Cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay Apple Watch, watchOS 5.0.1 | Waxaan ka socdaa mac
Runtu waxay tahay in Apple aysan istaagin dadaalkeeda ku aadan inay ka dhigto wax soo saarkiisa inay u shaqeeyaan sida ugu wanaagsan uguna macquulsan oo hadii ay goor dhow faafiyaan nidaamka cusub ee watchOS 5, markii dambena sida asxaabteena Jordi noo sheegay maalmo kahor watchOS 5.0.1, hadda waxay ku muujinayaan shabakadda, isticmaaleyaasha dhibaatooyinka ku qaba dib u soo celinta Apple Watch. Sidaan horeyba ugu sheegnay maqaalka Jordi, watchOS 5.0.1 waa cusbooneysiin deg deg ah oo loogu talagalay dadka isticmaala Apple Watch ee Apple ay ku hagaajiso dhibaatooyinka qaarkood, laakiin gaar ahaan mid ka horjoogsanaya Apple Watch inuu si sax ah u dalaco.
Haddii aad u cusbooneysiisay Apple Watch-kaaga daawashada 5, waxay noqon kartaa in maalmihii ugu dambeeyay aad ogaatay in dib u soo celinta qalabka uusan gebi ahaanba sax ahayn. Kuwa Cupertino waxay khaladaad ku ogaadeen casriyeyntii ugu dambeysay ee ay dhigeen daaweyn socota, nooca nidaamka 5.0.1, inkasta oo dadka isticmaala qaarkood sii wadaan inay ka warbixiyaan dhibaatooyinka dib u rarka.
Apple ayaa si dhakhso leh u ogaatay inay jiraan dhibaatooyin ka jira watchOS 5 waxayna ku hagaajiyeen watchOS 5.0.1. Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaasha sii wadaya inay soo sheegaan dhibaatooyinka dib u soo kabashada qalabkooda ayaa bilaabay inay arkaan. Muxuu cusbooneysiinta cusboonaysiinta ahayd:
Xalliyaa arrin sababtay in adeegsadayaasha qaarkood aysan helin amaah ay ku istaagaan galabtii.
Xalliyaa arrin sabab u ahayd tiro yar oo isticmaaleyaal ah inay arkaan kororka daqiiqadaha jimicsiga.
Go'an arrin taas oo ka horjoogsan karta Apple Watch inay lacag soo rogto.
Saddexda mushkiladood, midda muhiimka ah ayaa ah dib-u-buuxin, oo haddii aaladda aan si fiican dib loogu soo celin, xitaa waanu dhaawici karnaa. Shaki la'aan, waxaa jira waqtiyo aan isweydiineyno sida ay suurtagal u tahay in Apple ay wareejiso nidaam leh noocyada guul darrooyinka. Sidaas u aad iPhone iyo Ku bilow cusbooneysiinta Apple Watch-gaaga kahor intaanay dhibaatooyin la kulmin. Haddii mar haddii la cusboonaysiiyay aad weli dhibaatooyin ku qabtid dib-u-soo-buuxinta, waxaan kugula talineynaa inaad furfurto oo aad bilowdo hawsha mar labaad.
Waxaan dheg u noqon doonnaa dhaqdhaqaaq kasta oo suurtagal ah ee Apple illaa iyo hadda, waxaan ogaanay oo keliya waxa saaxiibkeen Jordi Giménez noogu sheegay maqaalkiisa ku saabsan nooca watchOS 5.0.1
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Qaar ka mid ah Apple Watch waxay la kulmaan dib u soo buuxinta arrimaha la leh watchOS 5.0.1